Ithegi: google chrome » Martech Zone
Maka: google chrome
Uyithatha njani i-Screenshot yeWebhusayithi eneMilinganiselo ethile usebenzisa iGoogle Chrome
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 8, 2021 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 8, 2021 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuba uyiarhente okanye inkampani enepotifoliyo yeesayithi okanye amaphepha onqwenela ukwabelana ngawo kwi-intanethi, mhlawumbi uye waya kwintlungu yokuzama ukuthatha iifoto zesikrini ezifanayo kwindawo nganye. Omnye wabathengi esisebenza nabo wakha izisombululo zeIntranet ezinokubanjwa ngaphakathi ngaphakathi kwenkampani. I-Intranets ziluncedo olukhulu kwiinkampani ukunxibelelana neendaba zenkampani, ukuhambisa ulwazi lokuthengisa, ukubonelela
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Isibhengezo sika-Apple sikaJuni 2020 sokuba i-IDFA iya kuba yinto yokungena kubathengi ngo-Septemba 14 ukukhutshwa kuka-Septemba beziva ngathi ityali irhuqiwe phantsi kwe-80 yezigidigidi zentengiso, ithumela abathengisi ukuba benze into elungileyo elandelayo. Sele kudlule iinyanga ezimbini, kwaye sisaqala iintloko. Ngokuhlehliswa okufuneka nje kude kube ngo-2021, thina njengeshishini kufuneka sisebenzise eli xesha ngokufanelekileyo ukufumana umgangatho omtsha wegolide
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Ndisandula ukubhala malunga nokuthandana kwam kwakhona kunye ne-Twitter kwaye ndabelana ngezixhobo ezikhulu zokulawula abalandeli bakho be-Twitter. Nasi esinye isixhobo esihle endisandula ukufumanisa! URiffle nguCrowdRiff yiPlagi yeChannel eyongeza ipaneli yedeshibhodi ye-Twitter ekunceda ukuba uchonge kwaye uhlalutye ulwazi kumsebenzisi we-Twitter. URiffle ubonelela ngolwazi kubandakanya umsebenzi, ukubandakanyeka kweakhawunti, umthombo weetweets kunye nokukhankanywa kwabo okuphezulu kunye nokuqina.